बडोे सुझबुझसहित काम गर्नुपर्ने बेला
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न धेरै मेहनत गर्नुप¥यो । यसको चर्चा पटक पटक भइसकेको छ । हजारौँ व्यक्तिको बलिदानका साथै करिब ७० वर्ष समय लाग्यो र अन्ततः संविधान जारी भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि पहिलोपटक नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसले नेपाली जनताको मनोभावना स्पष्ट पा¥यो । यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ठूलो योगदान छ । यो योगदानलाई मूर्तरूप दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ठूलो योजना छ । नेपालमा पहिलोपटक वामपन्थी गठबन्धन । यो गठबन्धन पछिको एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको गठन । यसको श्रेय ओलीले बडोे सुझबुझ सहित काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पार्टी गठन गर्दा आन्दोलनमा सक्रियता र पृष्ठभूमि हेरेर गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । छुट्टाछुट्टै पार्टीको हैसियतले मात्र होइन । सबै प्रकारका व्यक्तित्व अटाउने, योगदानलाई सम्मान गर्ने त्याग र तपस्या हेर्ने गरी पार्टी गठन गर्नुपर्छ । जनप्रिय, जनमुखी, जनमत समेत हेरेर व्यक्ति छानेर पार्टी गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ र यही पार्टीले यो देशमा समाजवादको नीति लागू गर्नुपर्छ ।
के हो त समाजवाद ? पुँजीवादको विकास समाजवाद हो । पुँजीवाद पछिको चरण समाजवाद हो । अहिले नेपालमा सामन्तवाद हारेर पुँजीवाद स्थापना भएको हो । अब यो जनमतले समाजवादतिर जान आग्रह गरेको छ । समाजवाद विस्तारै साम्यवादतिर जान्छ । किनकि समाजवाद साम्यवादको पहिलो चरण हो । समाजवादमा राज्यका उत्पादनका साधन बिस्तारै सामाजिक स्वामित्व हुन्छन् । श्रमिक वर्ग सम्मानित हुँदै जान्छन् । उत्पादनको न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति ज्यालादारी श्रमिक हुन्छन् । राज्यले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँछ । व्यक्तिगत सम्पत्ति भने रहिरहन्छ । जुनसुकै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता रहन्छ तर तत्काल एक दलीय अधिनायकत्वको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद नै हुनेछ । यसका निम्ति समाजवाद विरोधीको पनि अस्तित्व रहन्छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । यसलाई लागू गर्ने अठोट वाम गठबन्धनले गरेको छ । अब यो अभिभारा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आइ परेको छ । धेरै सम्भावना उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यो अभियानको सहकर्मी हुने परिस्थिति छ । कम्युनिस्ट पार्टी कसरी हाँक्ने यसको जिम्मेवारी प्रचण्डमा आइपर्नेछ । कम्युनिस्ट पार्टी हाँक्न ठीकसँग सकियो भने सरकार ठीकसँग चल्छ । सरकार ठीकसँग चल्यो भने समाजवादतिर देशको व्यवस्थापन हुन्छ । समाजवादतिर देश अगाडि बढ्यो भने समाज विकास समृद्धितर्फ दौडन्छ र केही वर्षमै नेपाल विकसित राष्ट्र हुन जान्छ । अनि यो देश बुद्धको देश, सगरमाथाको देश, पशुपतिनाथको देश भन्नेहरूले पनि बडो ठाडो शिरले गर्वसाथ नेपाली भनेको सुहाउँछ । यहाँको जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन विकास, कृषिको आधुनिकीकरण अब सुरु हुन्छ ।
१८४८ मा माक्र्सले प्रतिपादन गरेको समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्तलाई १९१७ लेनिनले मजदुर वर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । यसलाई विकसित गर्दै चीनमा माओले किसानको नेतृत्वमा मजदुरको सहयोगमा नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादतिर गएका थिए । नेपालमा अझै नयाँ युग आएको देखिन्छ । किसान, मजदुर, निम्न वर्गीय समाज मिलेर एकै चोटि पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादतिर जाने अठोट गरेको छ । यो राजनीतिक सैद्धान्तिक दृष्टिले सङ्क्रमणकाल नै हो । वर्तमान चुनावको नतिजाले पुँजीवादी विचार राख्नेलाई नराम्रो सङ्घ हार खुवाएको छ । यहाँ कस्ता उमेदवार थिए भन्ने कुरा मतदाताले होश गरेनन् । स्थायी सरकार, समाजवादी सिद्धान्तलाई हेर्दा वाम गठबन्धन नै उपयुक्त हो भन्ने ठहर गरे ।
के हुन् त समाजवादको आधारभूत सिद्धान्त ? सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिवृिद्ध गर्न सबै सदस्यको समान दायित्व । श्रमलाई प्रधानता र सबै सक्षमले अनिवार्य काम गर्नैपर्ने । जीवन निर्वाहका साधन प्राप्ति हक नै हुने । हरेकको क्षमता अनुसार काम, काम अनुसार क्षमता (मूल्य) प्राप्त गर्नु मुख्य सिद्धान्त हो । नेपाल पुँजीवादी व्यवस्थामा रहेको छ । अब यो गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण भई देशलाई समाजवादतर्फ लैजानु यसको कर्तव्य हो । यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्था निजी सार्वजनिक र सहकारी हो । यसको कारण निजी अर्थ व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न भने तत्काल सकिँदैन । निजी अर्थ व्यवस्थालाई मान्यता दिँदै समाजवादतर्फ जाने नीति बनाउनु यो सरकारको पहिलो चुनौती हो । लामो समय नेपालले केन्द्रीकृत शासन खेपेको, सामन्तवादी संस्कार भोगेको, एक जातीय शासन चलेको अवस्थामा ओली र प्रचण्डलाई यो समाजवादी समाज चलाउन स्थापना गर्न र नेपाललाई गणतान्त्रिक पद्धति बमोजिम चलाउन सहज भने छैन । तर यही काम गर्न अनिवार्य पनि छ । यस्तो चुनौती र अवसर देशका जनताले यो एक जोडी कम्युनिस्ट नेतालाई दिएको छ । के अब देशमा भ्रष्टाचार विस्तारै घट्छ ? अब औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ ? के अब रेल चल्छ ? के अब विद्युत् निर्यात हुन्छ ? नेपाली युवा स्वरोजगार हुन्छन् ? वा मुलुकले रोजगारी दिलाउँछ ? हो अब यसरी नै मुलुक समृद्धितर्फ जान्छ । स्थानीय तहमा, प्रदेश स्तरमा साथै सङ्घीय सरकारमा बहुमत भएको छ । यसको सदुपयोग गर्नु पार्टीका आम कार्यकर्ता तथा नेताको काम हो । मलाई के भन्ने होइन । अब समाजलाई के भन्ने बेला आएको छ । समाज सप्रे म सप्रिने, समाज बिग्रे म पनि बिग्रने हुन्छ । सप्रे सबै, बिग्रे सबै समाजवाद । कानुन सबै नयाँ, संविधान नयाँ, नेता नयाँ अब काम पनि नयाँ । नयाँ काममा सबै जाने मेलो सुरु भएको छ । मुलुकले पुरानो थोत्रो व्यवस्था सदाका लागि फालेको छ । अब देशका सबै स्रोत, साधन समाजको हुनेछ । समाज सिङ्गै देशका लागि हुनेछ । दुवै छिमेकीको साझा साथी बन्नेगरी काम अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ । यसका लागि झापा विद्रोहबाट खारिएर आएका र जनयुद्धको कसीमा घोटिएका नायकहरूको सीप, क्षमता र सक्रियतामा देश प्रगतितर्फ लम्किन्छ । किसान बिग्रिएका छन् । मजदुर बिग्रिएका छन् । यी दुई वर्ग बिग्रेकै अवस्थामा देश सप्रिन मिल्दैन । यसका निम्ति कानुन बजेट आवश्यक छ । प्रतिपक्षले पनि देश मेरो हो भन्ने सोचेर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । प्रायः सत्तामा बसेको काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा रहन पनि अभ्यास जरुरी छ । यसका लागि उसका कमी, कमजोरी जनताले पुनः सुधार गर्न आग्रह गरेको पनि हो यो जनमत । सबैको सद्बुद्धिले देश विकास होस् यही सारा नेपालीको शुभेच्छा छ । जितेका र पराजित भएका सबैलाई शुभकामना छ । सबै जित र सबै हार देशको जित मान्नु पर्छ लोकतन्त्रवादी सबैले जनमत स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।